विश्व – Page 62 – Google pati
चीन भ्रमणमा रहेका उत्तर कोरियाका नेता किम जोंग उन र चिनीयाँ राष्ट्रपति र शी जिनपिंगबीच भेटवार्ता भएको छ । उत्तर कोरियाका नेता किम जोंग उन र चिनीयाँ राष्ट्रपति र शी जिनपिंग चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार राजधानी बेइजिङमा चिनीयाँ राष्ट्रपति शी जिनपिंग र किम जोंग उनबीच भेटवार्ता भएको छ...बाँकी
उत्तर कोरियाली नेता किम सुटुक्क बेइजिङमा !
अनपेक्षित रुपमा बेइजिङ आएका उत्तर कोरियाका उच्च अधिकारी सर्वोच्च नेता किम जोङ उन हुनसक्ने अनुमान हुन थालेको छ । उत्तर कोरियाका उच्च अधिकारी ट्रेनमार्फत बेइजिङ पुगेको खबर जापानी मिडियामा आएको थियो । दक्षिण कोरियाले उच्च अधिकारीको पहिचान नभएको बताएको छ तर, घटनाक्रमलाई होसियारीपूर्वक हेरिरहेको बताएको छ । उत्तर कोरिया...बाँकी
रुसको शपिङ सेन्टरमा आगलागी, ३७ को मृत्यु
रुसको साइबेरियास्थित एक शपिङ सेन्टरमा आगलागी हुँदा कम्तिमा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । केही व्यक्ति वेपत्ता छन् । एक सय जनाभन्दा बढीलार्इ उद्धार गरिएको छ । स्थानीय मिडियाका अनुसार केमेरोफोको विन्टर चेली मलको चौथो तलबाट आगलागी शुरु भएको थियो जहाँ सिनेमा घर छ । मृत्यु हुनेहरु धेरैजसो सिनेमा घरमा...बाँकी
दुर्घटनामा मृत्यु भएका पाइलटकी पत्नीको पनि मृत्यु
काठमाडौंमा दुर्घटना भएको युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान चालककी पत्नीको शुक्रबार विहान मृत्यु भएको छ ।विमान चालक अविद सुल्तानकी पत्नी अफ्सना खानमको बंगलादेशको राजधानी ढाकाको नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ न्युरो साइन्स एण्ड हस्पिटलमा मृत्यु भएको हो ।उनलाई गत आइतबार हर्ट अट्याक भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको मृत्यु शुक्रबार विहान साढे...बाँकी
किन मागे माफी जुकरवर्गले ? अब के हुन्छ फेसबुक ?
फेसबुकका करोडौं प्रयोगकर्ताका गोप्य डाटा चोरी भएको प्रकरणमा फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्गले आफ्नो कम्पनीबाट गल्ती भएको स्वीकारेका छन् । उनले आफूमाथि विश्वासघात भएको भन्दै यसको ब्यवस्थापन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।जुकरबर्गले भनेका छन् ‘एप बनाउने अलेक्जेण्डर कोगन, क्याम्ब्रिज एनालिटिका र फेसबुकबीच जे भएको थियो । अहिले विश्वासघात भयो ।’फेसबुक र अन्य ब्यक्तिमाथी...बाँकी